Qatar oo colaad hor leh galisay Soomaaliya & Carabta oo go’aan midaysan qaadanayso - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Qatar oo colaad hor leh galisay Soomaaliya & Carabta oo go’aan midaysan...
Qatar oo colaad hor leh galisay Soomaaliya & Carabta oo go’aan midaysan qaadanayso
Wadamada ku midoobay ururka Jamaacada Carabta ayaa maanta qaatay go’aan loo dhan yahay oo ay uga soo horjeesteen Ciidamada Turkiga ee gudga u galay dalka Siiriya. Sidoo kale Jaamacada Carabta ayaa dib ugu martiqaaday dalka Suuriya in ay dib ugu biirto Ururka Jaamacada Carabta oo horay looga saaray.
Go’aankaan ayaa waxa si wadajira u tagaeeray dhamaan dalalka Carabta inta aan ka hayn dalkaa Qatar oo ay la socoto dowlada Soomaaliya. Iyada oo laga filaayay in ay dowlada Qatar diidayso go’aanka Jaamacada Carabta ayaa waxa yaab ku noqotay dalalka Carabta go’aanka ay dowlada Soomaaliya kula safatay dalka Qatar.
Warbaahinta Carabta ayaa caawa si xoog leh uga hadashay tilaabada uu qaaday Madaxweyne Farmaajo, qaar baa ku tilmaamay go’aanka Soomaaliya mid “qar iska tuur”ah. Idaacadaha RT iyo Al Carabiya ee laga yeerahay dalalka Ruushka iyo Sacuidga ayaa sidoo jkale sheegtay in Soomaaliya aan marnaba laga filanaynion in go’aan noocaan ah qaadato oo ay ku biirto dalka Qatar.
Talaabadaan oo uu ka danbeeyo Fahad Yasin ayaa mar kale xaqiijinaysa in Wasaaradii Arimaha Dibadda ee dalka Soomaaliya laga xakumo Doha. Qaar ka mida howlawadeenada Wasaaarada Arimaha Dibada ee Soomaaliya ayaa u sheegay MOL in go’aanka dowlada Soomaaliya ay ka maqleeyn idaacdaha Carabta.
Waxaan shaki ku jirin in dowlada Qatar ay Soomaaliya galisay dagaal hor leh oo soo dadajin doono burbur ku yimaado Dowlada Farmaajo isla markaana umada Soomaaliyeed u abuurayso cadow ka kooban 18 dal oo ka tirsan oo ka tirsan Ururka Jaamacada Carabta.
Previous article(Daawo) Xalimo Yarey oo sheegtay in qabaneyso doorasho qof iyo cod ah.
Next articleQatar and Somalia register reservations over joint statement condemning Ankara’s attack in Syria